के हो २४ घण्टामा मृत्यु गराउन सक्ने ‘चन्दिपुरा भाइरस’ ? – Annapurna Post News
April 14, 2022 sujaLeaveaComment on के हो २४ घण्टामा मृत्यु गराउन सक्ने ‘चन्दिपुरा भाइरस’ ?
‘चन्दिपुरा भाइरस’ नेपालमा पुष्टि भइसकेको त छैन। तर नेपालसँगको लामो र खुला सिमाना जोडिएको देश भारतमा भने बेला बेलामा बालबालिकामा यो भाइरसले प्रकोपको रुप लिएको देखिन्छ। उच्च मृत्युदर र लक्षण देखिएको केहि घण्टामा नै मृत्युको मुखमा पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भएको यो भाइरस भारतको लागि मात्र नभएर नेपालको लागि पनि चिन्ताको विषय हो।
अन्तमा, सन २००३ मा मनसुनको शुरुवातीसंगै ‘चन्दिपुरा भाइरस’ ले आन्द्र प्रदेशमा झन्डै ४ महिनासम्म प्रकोपको रुप लिएको थियो। सो अवधिमा ९ महिनादेखी १४ बर्षसम्मका ३२९ जना बालबालिका यो भाइरसबाट प्रभावित भएका थिए। त्यस मध्ये १८३ जनाको मृत्यु भएको थियो। यसले विश्वको ध्यान ‘चन्दिपुरा भाइरस’ प्रति नै आकृष्ट गरेको थियो। भाइरस फैलाउने भेक्टर ‘स्याण्डीफ्लाई’ नेपालमा पनि व्यापक रहनु र नेपाल-भारत पनि सहजै आरपार गर्नसक्ने भएकोले ‘चन्दिपुरा भाइरस’ प्रति सम्बन्धित निकायले विशेषत चासो र निगरानी बढाउनु पर्ने हुन्छ।
-स्वास्थ्यखबरबाट (डा. शेरबहादुर पुन शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक हुन्।)